Qaarraadka ee aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee shurkha
Waxaad halkan tihiin:Guri > Products > Architectural Mesh > Goobta codsiga ah>Lacagta darafka shubka
Qarshiiska ee birta la qabsashada waxaa looga isticmaalaa si badan. Waxay isku xidhiidhaa badbaadada gaarka ah iyo shaqada badan oo kale oo kale oo kale oo kale oo kale oo kale, iskuulka iskuulka. Wax muhiim ah waxaa lagu badbaada dhismaha ka dhismaasha cimriga.
Biilka la qabsashada waxaa ku yaal hantooyinka aasaasiga ah iyo midka badan ee miisadda, kuwaasoo ah uu dhiso dhismo cusub iyo dib uu uu dhisaa dhismooyinka hore.
Daryeelka goobta kadibka muuqada goobta hore uu dhismeedka ka dhismaad ka sii gaar ah iyo lambala.
Qartooda waa kan ugu muhiimsan.Wargeli kartaasha
Waxaa u baahnaa meelaha weyn, si uu u baahnaa xoogga ee kharashka iyo guridda gurigu waa muhiim. Sidoo kale daryeelka dhibaatooyinka dhibaatooyinka dhibaatooyinka ee dhismooyinka iyo diyaarinta ee shirkadda.
Aluminium waa kharashka ugu badan isticmaaley.
Waan horeysa sare.
Waxaan u fiican yahay dabadeed.
Sidoo kale salka cimuulka waxaa looga isticmaalaa waxyaabaha caawimaad, maxaa yeelay, waxaa ku yaala saameyn lacagta.
Guryaha ee ee uu dhisay
Bareen biyaha la qabsan oo ah sameeyaha goob-doon ah iyo goobta lacag ah.
Qofka guryaha waxaa u jeedaa qiimaha guryaha.
Waxyaabaha goobta ah, waxaa lagu jeedaa si joogto ah, sida daahirka iyo iskuulka.
Saamka adag ah ee aragta waxaa laga heli kartaa xirfada goobta iyo waqtiga la xiriira.
Goobaha dabaxada furan waxay ka siiyaa dabaylka biirka wanaagsan. Dadka ah sameeyaasha waxaa ka doortaa 35% meel furan, si ay ka uu uu uu uu uu uu uu aqoonsan, sida iftiinta, dabka, iskuulka, iskuulka ee lacagta iyo badbaadada gaar ah.
Daryeelka hareeraha waxaa ka mid ah guriga ee daboolka iyo anodiyinka.
Waxbarashada ee bowder ayaa doorashado badan oo ku daboolayso ee birta hore, taasoo kaa caawin kara ka horeysa ee burska iyo guriga.
I Anodizing wuxuu u hayaan karaa uu xidhiidha birka. Sida caadiga ah waxaa loogu leedahay danaha aluminium, kuwaas oo u badbaadin dambeysa dambeysa kilifka iyo guriga.
Guryaha ee dhisaad ah
Qaaro kale ah
Saarayaasha waxaa sidoo kale ka fiirsanaya shahaadada calaamaha ah ee fiican. Waxaan caawinayaa caawiyaa caawimaad oo kaliya ee caawiyaa caawiyaa caawimaad ee caafimaad.
Mashruuxa kala duduwan waxaa looga isticmaalaa mashruuxo kala duduwan, tusaale ahaan guryaha jardiinka, saldhiyada tareenada, guurka dudubooyinka, Isbitaalada, guryaha ee guryaha.
Ka dambe :Sidaas daraada
Waa maxay u xirfadda archeynta?
Waa maxay u xirfadda archeynta?ArdarkaLacagsashadaWaxaa looga codsan dhismaha badbaadada iyo isticmaalka. Lacagta waxaa laga heli karaa alaab badan oo kala duduwan, waayo, qoryo, dhagax, konon iyo ala...
Codsashada shahaadada ah
Codsashada shahaadada ahSidoo kale dhiso birta,Fiirka ee guudaWaxaa lagu dhashaa fasax ah. Waxaa si badan isticmaalaa dhismo, xaaladda iyo guryaha guriga, si uu u sameyso raxadda hore.Fiirka ee burbur...
Indhiineersta GWS- iyo aqoonta guriga ah
Lacagta darafka shubkaMaalintadana waxaa lagu isticmaalaa archiritiinta codsiyada kala duduwan, tusaale ahaan xafiiska iftiinka la xiriira, calaamooyinka ee shahaadada xirfadeedka iyo boolka shirkada....
Usuulka dhiso ee xirfadda guryaha
Fiirka ah Gurigu waxay ku jiraan labo meelo la xidhiidheyso, oo ku saabsan daboolka la xiriira, iyo dhinac sare. Shaqada guriga ayaa guriga u dhacaysaa oo dhan, sidii in uu uu uu uu uu...
Lacagta shurkaGoobankaWax ka horey waxaa looga isticmaalay fasaadka, Waxayna ku daboolayn dahab iyo fidlaac, oo ku daboolayn oo naxaas iyo naxaas ah. iyo isticmaaleyso xirfadeed ee shuruudaha, si ay u...
Sidee uu yahay ardhiskada?
Dirsashadu wuxuu noqonaa farshaxanka ee waxbarashada
WaxbarashadaUgu dambeyso wuxuu u noqday si aad u muhiim ah ee farshaxanka. Markii dabarka ka fiiriyey, waxaa la mid ah oo kale oo kale. Waxay isbeddelaysaa waxbarashada horumarinta, horumarinta beddel...